Maamulka degmada Calluula oo sheegay inay u tagayaan burcad badeeda haysata Markabka. | puntlandi.com
Maamulka degmada Calluula oo sheegay inay u tagayaan burcad badeeda haysata Markabka.
Maamulka degmada Calluula ee gobolka Gardafu ayaa sheegay inay diyaar garow iyo abaabul ugu jiraan sidii ay ugu tagi lahaayeen kooxda haysata markab laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta oo lagu haysto xeebta biye Cadde oo dhowr Mayl u jirta Calluula.
Guddoomiyaha degamda Calluula Cali-Shire Maxamuud Cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay wareysi lasoo yeelandoonaan ragga markab saaran, si ay u ogaadaan sababta ay u afduubteen iyo waxa ay doonayaan.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay inay iskudayayaan sidii Markabkaas iyo shaqaalaha la socda u heli lahaayeen xoriyadooda, wuxuuna sheegay inay dowladda Puntland marnaba raali ka ahayn in lagu xad gudbo maraakiibta xeebaheeda ku safraya, iyagoo aan wax shido ah wadin.
Warsidaha Puntlandi ayaa ogaaday in ragga haysta markabka ay yihiin kalluumaysato deegaanka ah oo dhawaan qeybtood maraakiib jariif ah ay kal tageen laashashkoodii.